कुरा मिल्दैन तर के छडी होला त्यस्तो जसले नेकपा विवाद ५ दिनमा टुंगियोस् (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कुरा मिल्दैन तर के छडी होला त्यस्तो जसले नेकपा विवाद ५ दिनमा टुंगियोस् (भिडियो)
काठमाडौं, २९ साउन । महामारीको संकट अझ बढेको छ । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नै विवादमा अल्झिएको छ ।
जनमतको वेवास्तामा अलमलिएको नेकपा विवाद समाधान होला त ? शंका/उपशंकाहरु यथावत् छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अन्तरवार्तामा नेकपा विवाद समाधान पाँच दिनभित्र हुने बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्टै अर्थात बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच वार्ता भएको छ । के नेकपा विवाद टुंगिएला ?
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ‘पाँच’ दिनमा विवाद समाधान हुन्छ भनेपनि नेकपाकै कतिपय नेताहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर, ओली पक्ष भने विवाद समाधान हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित हुँदै अनिश्चित बनेको छ । बैठक टुंगिन नसक्दा दलभित्रको ध्रुवीकरण तीव्र बनेको नेताहरुकै बुझाइ छ ।